Teererayi Trent Event
Doctor Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica, Oprah Winfrey.
Doctor Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi weMuvhuro.
Doctor Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura nhoroondo yehupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey.
Doctor Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki, rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navana mbuya vavo.
Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere, vakanga vatoita vana vana.
Vanoti kunyange hazvo vakaita vana vachiri mudiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro.
Vanoti vakatanga nezvidzidzo zve Ordinary Level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana Doctorate Degree ravo muAmerica.
Doctor Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey rwemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora.
Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano re United Nations.
Vasati vapihwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi weMuvhuro, Doctor Trent, vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe neMugovera manheru muNew Jersey.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Doctor Trent mu New Jersey, Amai Lorrine Takaruza, vanoti hurongwa hwavo hwemangwana hwuri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyaya siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo rwuchapihwa Doctor Trent neMuvhuro.
Mutangamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakanyorawo padandemutande reTwitter vachikorokotedza Amai Trent.
Mukuru weRozaria Memorial Trust, Muzvare Nyaradzai Gumbonzvanda, avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekuroodzwa kwevana vasati vabva zera, vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo rwuri kupihwa Doctor Trent sezvo zvichabatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekuroodzwa vasati vabva zera.
Doctor Trent, avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo, vakasvika muAmerica nemusi weChitatu vachibva kuZimbabwe.
Doctor Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West, uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International, iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica.
Nyaya Ina Marvellous Mhlanga Nyahuye